Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay tartan xifdinta Qur’aanka Kariimka ah oo lagu qabtay Kuwait – Radio Muqdisho
Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay tartan xifdinta Qur’aanka Kariimka ah oo lagu qabtay Kuwait
Tartanka xifdinta Qur’aanka Kariimka ah oo sanad waliba lagu qabto dalka Kuwait ayaa waxaa sanadkan ku guuleystay wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdirisaaq Cabdullaahi Cali oo galay kaalinta koowaad.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kuwait ayaa si aad ah u soo dhaweeysay guusha uu Cabdirisaaq Cabdullaahi Cali ka soo hooyey tartanka xifdinta Qur’aanka, waxaana la guddoonsiiyay abaalmarin gunaanadkii tartanka, iyadoo uu ka qeyb galay Amiirka Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, madax ka socotay Safaaradda Soomaaliya ee Kuwait iyo xubno kale.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kuwait oo kaashaneysa mas’uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ayaa qorsheyneya inay xaflad gaar ah u sameeyaan Cabdirisaaq Cabdullaahi Cali, si ay ugu abaalmariyaan guusha uu soo hooyay.
Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti) oo howlo shaqo u jooga dalka Kuwait ayaa lagu casuumay in uu ka qeyb galo xafladda lagu abaalmarinayo wiilka Soomaaliyeed ee tartanka xifdinta Qur’aanka ah ku guuleystay.
Madaxweynaha oo soo gebagebeeyay shirka dib u heshiinta Gobollada Dhexe “SAWIRRO”